Ribheka wemuBhaibheri Aitenda Muna Mwari (Genesisi 24:58)
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chiyao Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kazakh Kikamba Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norwegian Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
TEVEDZERA KUTENDA KWAVO | RIBHEKA
RIBHEKA akanga akatarisa nzvimbo izere makoronga nemakomo zuva zvarakanga rorereka. Pashure pemavhiki akati kuti erwendo, akanga atojaira kufamba ari mudenga, akatasva ngamera. Guta raakanga akurira reHarani rakanga rasara nemazana emakiromita nechekuchamhembe. Zvimwe aisazombofa akaonanazve nevanhu vemumhuri make. Zviri pachena kuti akanga ava kunetseka kuti upenyu hwake hwaizomufambira sei, kunyanya iye zvino paakanga ava kusvika kwaaienda.
Ribheka neboka revamwe vaaifamba navo, vakanga vatopinda mukatikati meKenani uye vakanga vava munzvimbo ine makomo yeNegebhu. (Genesisi 24:62) Ribheka anogona kunge akaona makwai. Nzvimbo iyi inofanira kunge yaiva nemasango uye isinganayi mvura yakawanda zvekuti vanhu vangarima, asi yakanga iine mafuro akawanda. Murume akanga akwegura aivatungamirira ndiye ainyatsoziva nzvimbo iyi. Akanga atononokerwa nekuudza tenzi wake mashoko anofadza aaiva nawo okuti Ribheka aizova mudzimai waIsaka! Asi Ribheka anofanira kunge ainetseka kuti aizorarama upenyu hwakaita sei munyika iyi. Anofanira kunge ainetseka kuti murume wake Isaka aiva munhu akaita sei? Vakanga vasati vamboonana. Isaka aizofara here paaizomuona? Ko iye Ribheka wacho aizomudawo here?
Munzvimbo dzakawanda mazuva ano, vanhu vangatoshamisika vakanzwa kuti munhu anotsvakirwa munhu wekuroorana naye. Asi tsika iyoyo ichiri kuitwa mune dzimwe nzvimbo. Pasinei nekuti tsika yacho inoitwawo kwaunobva here kana kuti kwete, unogona kungozvionawo kuti zvaitoda kuzvipira kwakakura kuti Ribheka aende kunzvimbo yaakanga asingazivi. Akanga ari mukadzi ane ushingi uye ane kutenda kunoshamisa. Zvinhu pazvinochinja muupenyu, kuva neunhu hwakadaro kunokosha. Pane humwe unhu hwakanaka uye husingawaniki muvanhu vakawanda hwatinoona pakutenda kwaiva naRibheka.
“NDICHACHERERAWO NGAMERA DZENYU MVURA”
Kuchinja kukuru kwakaitika muupenyu hwaRibheka kwakatanga asingambozvifungiri, achingoita zvinhu zvaainge akajaira. Akanga akurira muguta reHarani kana kuti pedyo neguta iroro riri kuMesopotamiya. Vabereki vake vakanga vakasiyana nevanhu vemuHarani nokuti vakanga vasinganamati mwari wemwedzi ainzi Sin, asi vainamata Mwari wavo, Jehovha.​—Genesisi 24:50.
Ribheka aiva tsvarakadenga yemusikana. Runako rwake rwaisangova rwechiso chete, asi aivawo musikana aishanda nesimba uye aizvibata. Mhuri yaaibva yainge yakabudirira zvokutova nevashandi, asi Ribheka aisabatwa sezai kana kuti semwanasikana wamambo; ainge akadzidziswa kushanda nesimba. Sezvaingoitwawo nevakadzi vakawanda vepanguva iyoyo, Ribheka akanga aine mabasa akaoma ekuita, aisanganisira kucherera mhuri mvura. Zuva rorereka, aitakura chirongo chake papfudzi oenda kutsime.​—Genesisi 24:11, 15, 16.
Rimwe zuva ari manheru, paakanga azadza chirongo chake, mumwe murume akanga akwegura akamhanya achiuya kwaari. Akataura naye zvinyoronyoro uye zvine ruremekedzo achiti: “Ndapota, ndipewo mvura shomanana.” Ribheka anogona kunge akaona kuti murume wacho akanga abva kure. Saka akabva atura chirongo chaiva papfudzi rake achibva amupa mvura yokunwa inotonhorera, kwete yokungonyorovesa pahuro, asi yokuti anyatsopedza nyota. Ribheka akaona kuti murume wacho aiva nengamera 10 dzaiva dzakagwadama pedyo uye kuti mudziyo wekuti dzinwire mvura wainge usina chinhu. Akaonawo kuti murume wacho airamba akamutarisa uye aida kuita zvose zvaaigona kuti amubatsire. Saka akati: “Ndichachererawo ngamera dzenyu mvura kusvikira dzaguta.”​—Genesisi 24:17-19.
Ribheka haana kutaura kuti aizocherera ngamera dzacho mvura shoma yekuti dzingonwa, asi akati aida kudzicherera kusvikira dzapedza nyota. Kana ngamera yakuvara nenyota, inogona kunwa mvura inopfuura marita 95! Kana kuri kuti ngamera dzacho dzose dziri 10 dzainge dzakuvara nenyota, Ribheka anofanira kunge akashanda zvakaoma kwemaawa akawanda. Asi paakazodzidirira mvura, zvinoita sokuti ngamera dzacho dzakanga dzisina hadzo nyota yakanyanya. * Ribheka aizviziva here izvozvo paakataura kuti aida kucherera ngamera dzacho mvura? Aiwa. Pasinei nokuti basa racho raizenge rakawanda sei, Ribheka aitoda kushanda nesimba kuti agamuchire zvakanaka murume uyu waakanga asingazivi. Murume wacho akabvuma kuti Ribheka acherere ngamera mvura. Akaramba akati ndee kuna Ribheka achimuona achimhanya kunochera mvura odzoka oidurura mumudziyo wekunwira mvura, odzokerazve kunochera imwe.​—Genesisi 24:20, 21.
Ribheka aishanda nesimba uye aiitira vamwe zvakanaka
Tine chimwe chinhu chakanaka chatinodzidza pane zvakaitwa naRibheka. Nyika yatiri kurarama yakazara nevanhu vanongofunga kuita zvakanakira ivo chete. Sezvakagara zvataurwa, vanhu vava ‘kuzvida,’ saka havadi kuitirawo vamwe zvakanaka. (2 Timoti 3:1-5) Kana muKristu asingadi kutevedzera zvinoitwa nenyika, anofanira kufungisisa nyaya iyi yemuBhaibheri yemukadzi uyu aimhanya achinochera mvura kutsime.
Ribheka anofanira kunge akazviona kuti murume wacho airamba akamutarisa. Matarisiro aiita murume uyu akanga asiri oruchiva asi airatidza kuti aishamisika uye aifara. Ribheka paakazopedza kucherera ngamera mvura, murume wacho akamupa chipo chezvishongo zvinokosha! Akabva amubvunza kuti: “Uri mwanasikana waani? Ndapota, ndiudze. Kumba kwababa vako kune nzvimbo yokuti tirare here?” Ribheka paakataura nezvemhuri yavo, murume wacho akafara chaizvo. Ribheka angangodaro akanzwawo kufara, saka akabva ati: “Kune uswa nezvokudya zvezvipfuwo zvizhinji zvatinazvo, uyewo nzvimbo yokurara.” Uyu waiva mutsa wakakura nekuti murume uyu aiva nevamwe vaaifamba navo. Ribheka akabva amhanya kumba kunoudza amai vake zvakanga zvaitika.​—Genesisi 24:22-28, 32.
Zviri pachena kuti Ribheka akakura achidzidziswa kuitira vamwe zvakanaka. Mazuva ano vanhu vakawanda havana mutsa, saka tinofanira kutevedzera kutenda kwaiva nemusikana uyu aiva nemutsa. Kutenda muna Mwari kunofanira kuita kuti tiitire vamwe zvakanaka. Jehovha anoitira vanhu vose zvakanaka nokuti ane rupo kuvanhu vose, uye anoda kuti vashumiri vake vamutevedzere. Kana tikaitira vamwe zvakanaka, kunyange kana vakasazotiitirawo zvakanaka, Baba vedu vokudenga vanofara.​—Mateu 5:44-46; 1 Petro 4:9.
ENDA UNOTSVAKIRA “MWANAKOMANA WANGU MUDZIMAI”
Murume uyu akanga akwegura aiva patsime aiva ani? Aiva mushandi waAbrahamu, uye Abrahamu nasekuru vaRibheka vaiva mukoma nemunin’ina. Saka akagamuchirwa nemaoko maviri mumusha maBhetueri, baba vaRibheka. Mushandi uyu anofanira kunge aiva Eriyezeri. * Akabva apiwa zvokudya, asi akaramba kudya achiti aida kutanga ataura nyaya yaainge afambira. (Genesisi 24:31-33) Tinogona kufungidzira Eriyezeri achitaura nemufaro, sezvo akanga achangobva kuona zvinhu zvairatidza kuti Jehovha Mwari wake aimukomborera parwendo rwake urwu rwaikosha. Chii chairatidza izvozvo?
Fungidzira Bhetueri, baba vaRibheka, nehanzvadzi yake Rabhani vachinyatsoteerera Eriyezeri achirondedzera nyaya yake. Akavaudza kuti Jehovha ainge akomborera Abrahamu chaizvo muKenani uye kuti Abrahamu naSara vaiva nemwanakomana ainzi Isaka uyo aizogara nhaka zvinhu zvose. Mushandi uyu akanga apiwa basa rinokosha rokutsvakira Isaka mudzimai pakati pehama dzaAbrahamu dzaiva muHarani.​—Genesisi 24:34-38.
Abrahamu akanga aita kuti Eriyezeri apike kuti akanga asiri kuzotsvakira Isaka mudzimai kubva pavakadzi vaiva muKenani. Nei? Nokuti vaKenani vakanga vasingaremekedzi Jehovha Mwari uye vasingamunamati. Abrahamu aiziva kuti Jehovha aizoparadza vanhu ivavo nemhaka yezvakaipa zvavaiita. Akanga asingadi kuti mwanakomana wake waaida Isaka abatane nevanhu ivavo uye kuti atevedzere tsika dzavo dzakaipa. Aizivawo kuti mwanakomana wake akanga aine basa guru raaizoita pakuita kuti zvakavimbiswa naMwari zvizadziswe.​—Genesisi 15:16; 17:19; 24:2-4.
Eriyezeri akaenderera mberi nokuudza vanhu vepamba apa kuti paakasvika patsime raiva pedyo neHarani, akanyengetera kuna Jehovha Mwari. Akakumbira Jehovha kuti amubatsire kusarudza musikana wokuti Isaka aroore. Akakumbira kuti chii? Akakumbira Mwari kuti aite kuti musikana wacho auye kutsime. Eriyezeri paaizomukumbira mvura, musikana wacho aifanira kumupa uyewo opa ngamera dzake mvura. (Genesisi 24:12-14) Saka ndiani akanga auya kutsime achibva aita izvozvo chaizvo? NdiRibheka! Fungidzira kuti anofanira kunge akanzwa sei kana kuri kuti ainzwa Eriyezeri achirondedzera nyaya yake.
Bhetueri naRabhani vakabayiwa mwoyo nenyaya yaEriyezeri. Vakati: “Chinhu ichi chabva kuna Jehovha.” Sezvaiitwa patsika dzavo panguva iyoyo, vakabva vaita sungano yokuroodza Ribheka kuti ave mudzimai waIsaka. (Genesisi 24:50-54) Asi zvaireva here kuti Ribheka aitongofanira kubvumirana nazvo?
Mavhiki mashoma akanga apfuura, Eriyezeri akanga ambotaurawo nezvenyaya iyoyo paakabvunza Abrahamu kuti: “Ko kana mukadzi wacho akasauya neni?” Abrahamu akanga apindura achiti: “Uchabva wasunungurwa pane zvaunosungirwa kundiitira nemhiko.” (Genesisi 24:39, 41) Mumhuri yaBhetueri, musikana wacho aikwanisawo kusarudza zvaanoda. Eriyezeri akafara chaizvo nekubudirira kwezvaakanga afambira zvokuti zuva rakatevera racho, akabva atokumbira kuti aende kuKenani naRibheka. Asi mhuri yacho yaida kuti Ribheka ambogara kunyange kwemazuva gumi zvawo. Vakazopedza nyaya yacho vachiti: “Ngatishevedze musikana wacho tinzwe zvaanotaura.”​—Genesisi 24:57.
Iye zvino Ribheka aifanira kuita chisarudzo chakakura chaizvo muupenyu hwake. Aizosarudza zvipi? Aizochema-chema kuna baba vake nehanzvadzi yake achikumbira kuti asaende here? Kana kuti aizofara kuti akanga abatanidzwawo pazvinhu zvainyatsooneka kuti zvaitungamirirwa naJehovha? Mhinduro yaakapa yakaratidza kuti ainzwa sei nokuchinja kwakangoerekana kwaita zvinhu muupenyu hwake. Akati: “Ndinoda kuenda.”​—Genesisi 24:58.
Zvakaitwa naRibheka zvinoshamisa chaizvo! Mazuva ano, zvatinoita pakuroora zvinogona kunge zvakasiyana chaizvo nezvaiitwa kare asi tine zvakawanda zvatinogona kudzidza pana Ribheka. Haana kunyanya kufunga zvakamunakira, asi zvaidiwa naMwari wake, Jehovha. Nanhasi, mazano ari muShoko raMwari anoshanda chaizvo panyaya yokuroorana. Rinotaura kuti ungaroorana nemunhu akaita sei uye kuti ungava sei murume akanaka kana kuti mudzimai akanaka. (2 VaKorinde 6:14, 15; VaEfeso 5:28-33) Zvakanaka kuti titevedzere Ribheka toita zvinhu nenzira inodiwa naMwari.
‘MURUME UYO NDIANI?’
Mhuri yaBhetueri yakabva yakomborera mwana wavo wavaida Ribheka. Ribheka nemukadzi aimurera ari mudiki ainzi Dhibhora, nevamwe vashandikadzi vake, vakabva vabatana naEriyezeri nevarume vake, ndokupinda munzira. (Genesisi 24:59-61; 35:8) Pasina nguva vakanga vatova kure neHarani. Rwendo rwacho rwainge rwakareba makiromita anenge 800, uye runofanira kunge rwakatora mavhiki matatu. Runofanira kunge rwainetesa. Ribheka aigara achiona ngamera, asi hatingati aiva neunyanzvi hwekudzitasva. Bhaibheri rinoratidza kuti mhuri yavo yaichengeta makwai, kwete kuti yaifamba nengamera ichiita bhizimisi rokutengesa. (Genesisi 29:10) Vanhu vasati vajaira kutasva ngamera vanowanzotaura kuti kugara pangamera kunorwadza, kunyange daro ravafamba riri diki chaizvo.
Ribheka haana kuisa pfungwa dzake pane izvozvo, asi akaramba achifunga zvaiva mberi, uye aiudzwa zvakawanda naEriyezeri nezvaIsaka nemhuri yavo. Ita seuri kuona murume uyu akwegura aina Ribheka vari pamoto usiku, achimuudza zvakavimbiswa Abrahamu naJehovha. Jehovha akanga avimbisa shamwari yake Abrahamu kuti mudzinza rake maizoberekwa mwana aizoita kuti marudzi ose evanhu akomborerwe. Fungidzira kushamisika kwakaita Ribheka paakaziva kuti vimbiso yaJehovha yaizozadziswa kuburikidza nemurume aizomuroora Isaka, zvichireva kuti naiyewo wacho aibatanidzwa.​—Genesisi 22:15-18.
Ribheka aizvininipisa; uhwu unhu husina vakawanda asi hunokosha chaizvo
Zuva rataurwa patangira nyaya ino rakazosvika. Boka racho parakanga rava muNegebhu uye zuva rava kunyura, Ribheka akaona mumwe murume achifamba musango. Murume wacho airatidza kuti aiva nezvinhu zvaaifungisisa. Magwaro anoti Ribheka “akaburuka pangamera,” zvimwe asingatombomiriri kuti ngamera yacho itange yanyatsopfugama. Akabva abvunza murume aimutungamirira kuti: “Murume uyo ari kufamba uko musango kuzosangana nesu ndiani?” Paakaudzwa kuti ndiIsaka, akabva afukidza musoro wake nejira. (Genesisi 24:62-65) Nei akafukidza musoro wake? Izvi anofanira kunge akazviita achiratidza kuti airemekedza Isaka uyo aizova murume wake. Vamwe vanogona kuti kuratidza ruremekedzo kwakaitwa naRibheka hakushandi mazuva ano. Asi chokwadi ndechokuti tose zvedu varume nevakadzi tinogona kudzidza kuzvininipisa sezvaiita Ribheka, nokuti ndiani wedu asingadi kuwedzera kuva neunhu uhwu hwakanaka?
Isaka uyo akanga ava nemakore anenge 40, akanga achiri kuchema amai vake Sara avo vakanga vava nemakore anenge matatu vafa. Izvi zvinotiratidza kuti Isaka aiva nerudo uye aiva munhu anobatikana chaizvo kana paitika chimwe chinhu chinorwadza. Isaka akakomborerwa nekupiwa mudzimai aishanda nesimba, aizvininipisa uye aiitira vamwe zvakanaka. Vakazogarisana sei? Bhaibheri rinoti Isaka “akamuda.”—Genesisi 24:67; 26:8.
Patopfuura makore anenge 3 900, asi nanhasi tichiri kuyemura Ribheka. Tinoyemura chaizvo ushingi hwake, kushanda nesimba kwaaiita, kuzvininipisa kwake uye kuitira vamwe zvakanaka. Saka tose zvedu, vakuru nevadiki, varume nevakadzi, vari muwanano nevasiri, ngatitevedzere kutenda kwake!
^ ndima 10 Akanga atova manheru. Nhoroondo yacho hairatidzi kuti Ribheka akatora maawa akawanda ari patsime. Hapana panoratidza kuti mhuri yavo yakanga yatorara paakapedza kucherera ngamera mvura, kana kuti pane munhu akauya kutsime kwacho kuzoona kuti nei akanga anonoka kudzoka.
^ ndima 15 Zita rekuti Eriyezeri harimo munyaya iyi, asi anofanira kunge ari iye mushandi anotaurwa imomo. Pane imwe nguva Abrahamu akataura kuti kana akashaya mwana aizopa nhaka yake yose kuna Eriyezeri, saka zviri pachena kuti Eriyezeri ndiye aiva mukuru pazera pavashandi vose vaAbrahamu uye ndiye ainyanya kuvimbwa naye. Ndiwo matsanangurirwo anoitwawo mushandi wemunhoroondo iyi.​—Genesisi 15:2; 24:2-4.